Ngokwe-Instagram, Abasebenzisi abazizigidi ezili-130 bacofa kwizithuba ezithengiswayo rhoqo ngenyanga, kwaye ayothusi into yokuba i-Instagram ngoku ibeka lo msebenzi ” Phuma ” iyafumaneka kuwo onke amashishini eMelika.
I-Instagram ixeliwe ukuba 80% akhawunti ukulandela akhawunti ishishini, echaza ngokucacileyo ukuba kutheni basebenze nzima beqinisekisa ukuba sinokufumana okuninzi kwiqonga lethu.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000. Cinga ukumakisha iimveliso zakho kuzo zonke iifomati zomxholo
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000. Intsebenziswano kunye nefuthe
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000. Sebenzisa ii-carousels
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaUkuthenga kwe-IGTV ngoku kuyafumaneka kwi-Instagram
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaNgokuzenzekelayo njenge-Instagram: IBot yokuKhetha ngokuZenzekelayo